Wararka Maanta: Khamiis, May 23, 2013-Shir looga Hadlayo Badbaadada iyo Nabadda Suxufiyiinta Af Soomaaliga ku hadla oo ka furmay Addis Ababa (SAWIRRO)
Shirka oo ay qabashadiisa iska kaashadeen Urur goboleedka IGAD iyo Ururka Suxufiyiinta Bariga Afrika (EAJA) ayaa wuxuu soocn doonaa afar maalmood, iyadoo maanta oo uu shirka furmay looga hadlay badbaadada iyo nabadda warbaahinta Soomaaliyeed.
Furitaankii shirka ayaa waxaa ka hadlay mas’uuliyiin ka kala socotay Ururka Suxufiyiinta Bariga Afrika ee EAJA, Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ, Urur goboleedka IGAD, Midowga Afrika, Wasaaradda Warfaafinta Itoobiya waxayna dhammaantood ka hadleen muhiimadda badbaadada iyo nabadda iyo warbaahinta Soomaaliyeed.
Xoghayaha guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed Cumar Faaruuq Cusmaan Nuur ayaa furitaanka shirka ka hadlay wuxuuna ugu horreyn soo dhaweeyay ka qeybgalayaasha shirka, isagoo sidoo kalena u mahadceliyay Ururradii suurtageliyay in uu shirkan qabsoomo.
Intaas kaddib waxaa uu ka hadlay ujeedka shirka loo qabtay, wuxuuna caddeyay in shirkan loo qabtay sidii loo heli lahaa badbaadada warfidiyeennada, wuxuuna tilmaamay in dadaal badan kaddib ay ku guuleysteen in arrinta nabadda iyo badbaadada warfidiyeennada la horgeeyo shirka Midowga Afrika uu ku leeyahay 24-ka bishan Magaalada Addis Ababa.
Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Bariga Afrika (EAJA)Dr. Muheldin Ahmed Idris ayaa shirka ka hadlay wuxuuna sheegay in ay farxad weyn u tahay in uu ka soo qeybgalo shir looga hadlayo nabadda iyo badbaadada warbaahinta Soomaaliyeed. Wuxuu intaas ku daray Dr. Muheldin inay difaacayaan Saxafiyiinta Soomaaliyeed iyagoo la kaashanaya ururrada caalamiga ah.
Waxaa ka hadlay Ambassador Ramtane Lamamra oo ka socday Midowga Afrika ayaa hadalkiisa furitaanka shir jeediyay wuxuuna aad ugu dheeraaday muhiimadda badbaadada warfidiyeennada, wuxuuna carrabka ku dhuftay in ay ka welwelsan yihiin tacaddiyada loo geysto warfidiyeennada.
Ambassador Lamamra wuxuu shirka ka sheegay in shir midowga Afrika uu ku leeyahay Addis Ababa looga hadlayo badbaadada iyo nabadda warfidiyeennada , wuxuuna hoosta ka xariiqay in xiriirka ka dhaxeeya Midowga Afrika iyo Warbaahinta Soomaaliyeed uu yahay mid wanaagsan.
Wariyayaasha ayuu dhankooda ugu baaqay in ay noqdaan kuwo iska hubiya wararka iyo warbixinnada ay dadka u gudbinayaan ka hor inta aysan baahin, si aysan u dhicin in iyana lagu xadgudbo.
Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Warfaafinta Itoobiya Shimeles Kamal ayaa shirka ka hadlay wuxuuna sheegay in dadka labada dale ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay muddo 22 sano ka badan ku wada noolaayeen xiriir aad u wanaagsan, wuxuuna carrabka ku dhuftay in dowladaha iyo shacabka labada dowladood ay ka go’an tahay in ay nabad iyo derisnimo wanaag ku wada noolaadaan. Wuxuu sheegay Ra’iisal Wasaarihii hor eee Itooboiya Meles Zenawi uu sheegay in ammaanka Qaranka Itoobiya uu yahay Soomaaliya oo xasilloon.
Intaas kaddib wasiirku wuxuu warbaahinta shirka ka qeybgeleysa ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii dalka Soomaaliya uu nabad u noqon lahaa, bacdamaa ay heystaan awood ay dadka uga dhaadhicin karaan in ay nabaddu muhiimad u leedahay. Sidoo kalena wuxuu sheegay in Soomaaliya ay sugeyso dadka wax bartay meel kasta oo ay caalamka ka joogaan si ay Soomaaliya cagaheeda isugu taagto.
C/rashiid C/qaadir Warsame oo ka socday Urur goboleedka IGAD ayaa sidoo kale shirka ka hadlay, wuxuuna sheegay in IGAD ay muddo dheer ku howlaneyd arrimaha Soomaaliya iyo sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha ka jira, wuxuuna xusay in dowladihii KMG ahaa ee Soomaaliya loo soo dhisay uu gacan weyn ku lahaa urur goboleedka IGAD.
C/rashiid waxaa uu sheegay in saxafiyiinta ay yihiin dhegaha iyo indhaha shacabka Soomaaliyeed waayo buu yiri waxay cod u yihiin dadka aan codka lahayn. Wuxuu ku boorriyay saxafiyiinta in ay dadka nabadda iyo waxyaabaha wanaagsan ay u sheegaan, isla markaana ay ka dhisaan dhinaca aqoonta diinta Islaamka.
Jamaal Axmed Ibraahim oo ah wakiilka IGAD ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay furitaanka shirka, isagoo dhaweeyay ka soo qeybgalayaasha shirka. Jamaal waxaa uu intaas ku daray in ujeedada shirkan loo qabtay ay tahay in la tayeeyo warfidiyeennada, isla markaana aqoontooda la kordhiyo, wuxuuna caddeeyay in ay qorshaha ugu jirto in ay waxbarasho u helaan saxafiyiinta si loo helo warfidiyeenno ka dhisan dhinaca aqoonta, kuwaasi oo buu yiri haddii ay si wanaagsan u shaqeeyaan dadkooda iyo dalkooda u horseedi kara horumar.
Berri ayaa lagu wadaa in saxafiyiinta shirka ka qeybgelaya ay booqdaan xarunta Midowga Afrika, halkaas oo uu socdo shirweyne lagu xusayo sanadguuradii 50aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay Ururka Midowga Afrika.